नुवाकोट-रसुवाको पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र प्रचारमा व्यवसायी (फोटोफिचर)
१२ फागुन, काठमाडाैँ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का अवसरमा नुवाकोट रसुवा पर्यटन समाज र नेपाल पर्यटन बोर्डको संयुक्त आयोजनामा दुई जिल्लामा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आजदेखि ‘भ्रमण वर्ष २०२०
नुवाकोट –रसुवा अध्ययन अवलोकन भ्रमण शुरु
११ फागुन, विदुर । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का अवसरमा नुवाकोट रसुवा पर्यटन समाज र नेपाल पर्यटन बोर्डको संयुक्त आयोजनामा दुई जिल्लामा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आजदेखि ‘भ्रमण वर्ष २०२०
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा “पर्यटन परी”, रोबर्टले तीन भाषामा जानकारी दिने
८ फागुन, काठमाडाैँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहीबारबाट रोबोटको सेवा सुरु शुभारम्भ गराएका छन । मन्त्रीले शुभारम्भ गरेको सेवा अन्तगर्त रोबोटले यात्रुलाई अभिवादन
८ फागुन, काठमाडौं । सरकारले आगामी बुद्ध पूर्णिमाको अवसर पारेर लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन गर्ने तयारी गरेपछि लुम्बिनी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । लुम्बिनीलाई प्राथमिकतामा राखेर बौद्ध सम्मेलन
खुल्यो अन्नपूर्ण पदमार्ग
७ फागुन, कास्की । हिमपहिरोले बन्द रहेको अन्नपूर्ण आधार शिविर (एबीसी) पदयात्रामा एक महिनापछि खुलेको छ । गत माघ ३ मा हिङ्कु केभ र देउरालीको बीचमा हिमपहिरो गएपछि चार कोरियाली
आज पशुपतिमा साधुको शोभायात्रा !
६ फागुन, काठमाडौं । महाशिवरात्रि पर्व त्रिदिवसीय रूपमा मनाउने गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मङ्गलबार पर्व मनाउन आएका सबै साधुको उपस्थितिमा शोभायात्राको तयारी गरेको छ । कोषका कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार
व्यवसायी भन्छन्- ‘अन्नपूर्ण आधार शिविरमा पर्यटकलाई कुनै असुविधा छैन’
४ फागुन, कास्की । अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्गमा पर्यटन व्यवसायमा सक्रिय छोम्रोङ पर्यटन व्यवस्थापन समितिले विश्वप्रख्यात अन्नपूर्ण आधार शिविर (एबिसी)मा पुग्ने पर्यटकलाई अब कुनै प्रकारको असुविधा नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
गिद्धमा ट्रान्समिटर जडान…
४ फागुन, काठमाडौं । सिनो खाएर मानिसलाई रोगव्याधिबाट बचाउने हिमाली गिद्धको अध्ययन नेपालमा सुरु भएको छ । प्राकृतिक कुचिकार मानिने हिमाली गिद्धमा स्याटलाइट ट्रान्समिटर जडान गरेर अध्ययन सुरु गरिएको हो । अन्नपूर्ण
प्रचण्डद्वारा भरतपुर पटिहानीमा नवनिर्मित अम्ब्रेला स्ट्रिटकाे शुभारम्भ
२ फागुन, भरतपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भरतपुर महानगरपालिका–२२ ले पटिहानीमा नवनिर्मित ‘अम्ब्रेला स्ट्रिट’ को शुभारम्भ गर्नुभयो । बिहीबार शुभारम्भ गर्दै उहाँले
छैटौँ नुवाकोट महोत्सवमा ५ करोडकाे कारोवार
२८ माघ, नुवाकोट । छैटौँ नुवाकोट महोत्सवमा रु पाँच करोड कारोवार भएको छ । ‘धार्मिक ऐतिहासिक कला संस्कृतिको संवद्र्धन–दिगो आर्थिक विकासका लागि व्यावसायिक प्रवद्र्धन’ भन्ने नाराको साथ यही माघ १६
नारायणीमा पानी जहाज सरर, अनलाइन बुकिङ खुल्दै
२८ माघ, चितवन । नारायणी नदीमा आगामी फागुनदेखि क्रुजसिप (सानो पानीजहाज) सञ्चालनमा आउने भएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–१६ मा क्रुजसीप निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले पानी जहाजसम्बन्धी
पर्यटकले रुचाएनन् कङ्क्रिट पदमार्ग
२७ माघ, गलकोट । विश्व भेगन अर्गनाइजेशनमा आबद्ध २१ विदेशी पर्यटक घुम्नलाई दुई महिना अगाडि बागलुङ आउनुभएको थियो । एक रात बागलुङ बजार घुमेर जिल्लाको पहिलो घरवास अतिथि सत्कार घरवासमा
पार्टी एकताबारे प्रचण्डः मैले हतार गरेको भए दुर्घटना वा अर्काे के हुन्थ्यो मैले भन्न सक्दिनँ
नारायणी नदीको कटानबाट डर मान्नुपर्ने अवस्था छैनः अध्यक्ष प्रचण्ड
२४ घण्टामा कोरोना सङ्क्रमणबाट थप तीनको मृत्यु, मृतकको सङ्ख्या ३८ पुग्यो
कूल संक्रमितको ५०.५ प्रतिशत घर फर्किए, ६ जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या शून्य
प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए ८ प्रहरीको हत्या गर्ने गुण्डा नाइके दुबे
प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने पूर्व माओवादी समूहका सांसदले थाले हस्ताक्षर अभियान
देशबासीका नाममा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बाेधन गर्दै, नेपाल टेलिभिजनमा हेर्न सकिने